ြမနမ်ာနိင်င၏ ငွရးကးရးက ဖွဖ့ိုးတိးတက်ရးစီမကိန်း (Myanmar Financial Sector Development Project -MFSDP) အကာင်အထည်ဖာ်ဆာင်ရွက်ရး ကီးကပ်မကာ်မတီ ပဉမ္စအကမိ်ြမာက် ပမှန်အစည်းအဝးကျင်းပြခင်း | FRD
မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာ၀န်
ဥပဒေများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် စာရင်းပုံစံများ
တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် အဖွဲ့အစည်းစာရင်း
ရုံးချုပ်၊တိုင်း / ပြည်နယ် လိပ်စာများ
22nd AIRM & 45th AIC Meeting
ြမနမ်ာနိင်င၏ ငွရးကးရးက ဖွဖ့ိုးတိးတက်ရးစီမကိန်း (Myanmar Financial Sector Development Project -MFSDP) အကာင်အထည်ဖာ်ဆာင်ရွက်ရး ကီးကပ်မကာ်မတီ ပဉမ္စအကမိ်ြမာက် ပမှန်အစည်းအဝးကျင်းပြခင်း
၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြပ်မတ်ကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ အနေနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်၊ တာဝန်ယူမှု၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များကို လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပြောင်းလဲလာသော ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးတို့ အတွက် စံနှုန်းများရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဦးတည်လျက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ အောက်ပါ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်-
(က) ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တို့မှ ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့သည့် Training of FRD Staff in Effective State-bank Ownership သင်တန်းအား ၅-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၆-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
(ခ) နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် (၄) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် Workshop for Global Experiences of State Ownership and Oversight of State Owned အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ Kempinski Hotel၊ နေပြည်တော်
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် (၄) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် Workshop on State Owned Bank Reform အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၈-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ချေးငွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း စတင်ထုတ်ချေးခြင်း
အကြမ်းဖက်သမား၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စု ၊ ယင်းတို့နှင့် ဆက်နွှယ်သူများ၏ ငွေကြေးများနှင့် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်တားမြစ်ခြင်း
အကြမ်းဖက်သမား၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စု ၊ ယင်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်သူများ၏ ငွေကြေးများနှင့် ရန်ပုံငွေ များအား ထိန်းချုပ်တားမြစ်ခြင်း
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၃၄) ရှိ အဆောက်အဦ အတွင်းအပြင် နံရံနှင့်မျက်နှာကျက်များ ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား ရက်တိုးမြှင့်ခေါ်ယူခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
ဖုန်းနှင့် email များ
Copyright © 2018 FRD. All rights reserved.
Website Designer MWS